कवि अर्यालका ‘प्रतिनिधि कविताहरु’माथि सङ्क्षिप्त दृष्टि | चितवन पोष्ट दैनिक
कवि अर्यालका ‘प्रतिनिधि कविताहरु’माथि सङ्क्षिप्त दृष्टि
२०७१ चैत्र १४, शनिबार ०५:१८ गते
डा. धनपति कोइराला
२०३४ सालमा ‘गोरखापत्र’ मा ‘तिर्सना यो कस्तो’ गीतिकविता छपाएर औपचारिक काव्ययात्रा आरम्भ गरेका कवि धर्मराज अर्याल (२०१२, चितवन) आशावादी जीवनवादी कविका रुपमा चिनिन्छन् । वर्तमानसम्म उनका ‘मातृभूमिको गीत’ (गीतसङ्ग्रह, २०३६), ‘सिर्जनाका धुनहरु’ (कवितासङ्ग्रह, २०५६), ‘तिम्रा मेरा बातहरु’ (कवितासङ्ग्रह, २०६०), ‘अन्तरमनका छालहरु’ (कवितासङ्ग्रह, २०७०) र ‘प्रतिनिधि कविताहरु’ (कवितासङ्ग्रह, २०७१) गरी पाँचवटा कृतिहरु प्रकाशित छन् ।
‘प्रतिनिधि कविताहरु’ कवि अर्यालको पछिल्लो प्रतिनिधिमूलक कवितासङ्ग्रह हो । यसभित्र ५५ ओटा कविताहरु सङ्कलित छन् । तिनमा विविध विषय सन्दर्भ, राष्ट्रियता, हार्दिक प्रेम, पेसा तथा मानवतावादी चिन्तन मुख्य छन् । विविध सन्दर्भहरुमध्ये ज्यादा विप्रलम्भ शृङ्गार भाव, नैतिक, राजनीतिक, सामाजिक, पारिवारिक, शैक्षिक, व्यावसायिक तथा युद्धजन्य विकृति र विसङ्गतिप्रति कटाक्ष गरिएका रचनाहरु छन् । राष्ट्रियताप्रति अपार मोह प्रकट गरिएका रचनाहरुमा राष्ट्रिय प्रकृति, संस्कृति, सबै भाषाभाषी तथा जातजातिहरुमा एकता, सहानुभूति, सद्भाव एवम् राष्ट्रिय अखण्डता सशक्त बनेर आएको छ । हार्दिक प्रेम मुखरित भएका रचनामा मांसल प्रेमभन्दा आत्मिक तथा पवित्र प्रेम र राष्ट्रिय प्रेम नै ध्वनित हुन पुगेको छ । पत्रकारिता आप्mनो पेसा भएकाले यस पेसासँग जोडिँदा पैदा भएका समस्या र तज्जन्य अनुभूतिलाई पनि यसमा उजागर गरिएको छ । गरिबी र अशिक्षाले ग्रसित नेपालीप्रति असीम सहानुभूति प्रकट गर्नुका साथै आप्mनो अधिकार मागेर नपाए खोसेर लिन सल्लाह दिइएको छ । वस्तुतः यसमा प्रस्तुत कविताहरुमा ज्यादा व्यङ्ग्यविद्रोही भावाभिव्यञ्जना नै फेला पर्दछ भन्दा अतिशयोक्ति हुँदैन पनि ।
यसमा प्रस्तुत रचनाहरुमध्ये विकृति र विसङ्गतिप्रति तिखो व्यङ्ग्य प्रहार गरिएका ९ ओटा कविता प्रस्तुत छन् । निराशावादी जीवन चेतना मुखरित हुन पुगेका ५ ओटा र अपार राष्ट्रप्रेमको भावाभिव्यञ्जना अभिव्यक्त भएका ३ ओटा कविता प्रस्तुत छन् । युगीन तथा समसामयिक यथार्थको जीवन्त वर्णन गर्नमा सफल रचनाहरु ७ ओटा छन् । प्रगतिवादी स्वर सशक्त बनेका ५ ओटा कविता देखा पर्दछन् । आशामुखी जीवनवादी ५ ओटा, स्वस्थ तथा पवित्र प्रेमभाव प्रकट गरिएको १, मानवीय पीडाको सजीव चित्रण गरिएका २, स्वस्थ समाजको परिकल्पना गरिएका ३, पेसागत मर्म, पीडा र अनुभूति घोलेर लेखिएका २ ओटा, स्वस्थ लेखनप्रति समर्पित १, आत्मिक दर्शन व्यक्त भएका २, क्रान्तिकारी भाव मुखरित हुनपुगेको १, भावुकता र स्वच्छन्दतावादी भाव व्यक्त भएको १, फेन्टासीको प्रयोग गरिएको १, विसङ्गतिवादी १, आत्मिक प्रेम प्रस्तुत भएको १, समयको मह¤वमाथि प्रकाश पारिएको १, अस्तित्ववादी जीवन चेतना प्रस्तुत हुन पुगेको १ र मानवतावादी भाव मुखरित भएका ३ गरी जम्मा यसमा ५५ ओटा कविता छन् । यस प्रकार प्रस्तुत कवितासङ्ग्रहमा विषयवस्तुगत विविधता छ भन्ने तथ्य स्पष्ट हुन्छ ।
कवि अर्यालले ‘निरमाया’ शीर्षकबाट कविता विन्यास आरम्भ गरी ‘तपतप जिन्दगी’मार्फत् यस सङ्ग्रहको यात्रा समापन गरेका छन् । आरम्भिक कवितामा कवि प्रजातन्त्रदेखि लोकतन्त्र हुँदै प्राप्त गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाले पनि गरिब, निमुखा र असहायहरुमा कुनै सुखद र उल्लासमय वातावरण ल्याउन नसकेकोमा तीव्र व्यङ्ग्य प्रहार गरिरहेका देखा पर्दछन् । र, यो असन्तुष्टि यसपछिका कविताहरुमा कतै व्यङ्ग्यविद्रोहका रुपमा र कतै भावुकतापूर्ण ढङ्गमा र कतै अपार राष्ट्रप्रेम घन्काउनमा केन्द्रित हुन पुगेको छ । अन्तिम कवितामा भने उनी मानवलाई स्वार्थपूर्ण कर्ममा नलागी सत्कर्म र सद्व्यवहारद्वारा कुनै दिगो सृजनशील कार्य गरी इतिहास रचेर मर्न सल्लाह दिन्छन् । कविका यसमा सङ्कलित रचनाहरु निकै परिष्कृत छन् र परिपाक अवस्था प्राप्त देखा पर्दछन् । यी सरल तत्सममय भाषिक प्रयोगयुक्त छन् र ज्यादा प्रथम पुरूषीय कथनपद्धतिमा नै आबद्ध छन् । बिम्ब र प्रतीकको प्रयोगका दृष्टिले हेर्दा उनका केही कविता मोहन कोइराला र भूपि शेरचनको समकक्षता राख्दछन् ।
साढे तिन दशकको लेखनयात्रामा अनुभव गरेका आप्mना तीता–मिठा क्षणहरुलाई कवि स्वयंले भनेझैँ यसमा यथासम्भव मानवतालाई नै पक्षपोषण गर्न खोजिएको छ (आप्mनो मन्तव्य) । यसले मानव सभ्यतालाई सिर्जनशील र परिष्कृत बनाउने चाहना राखेको छ । यसमा प्रस्तुत कविताले व्यथित तृषित क्षुधाग्रस्त मानवका चह¥याइरहेका घाउमा मलमपट्टी लगाउने र तिनलाई गाँस, बास, कपास र शिक्षाको न्यानो घाम प्रदान गर्ने कार्य गरेको छ । उनका ‘निरमाया’, ‘कुल्ली दाइ’, ‘राममाया’, ‘मीतज्यू’, ‘मैना’ जस्ता कविताका चरित्रहरुको भोगाइ साँच्चै नै करूण छ र हृदयसंवेद्य पनि छ । गरिबीको मार, उपेक्षाको भार र यौनतृष्णाका ज्वारभाटा सहेका उनका यी पात्रहरु नेपाली समाजका जीवन्त प्रतिनिधि चरित्रहरु हुन् । ‘मृत्युबोध’ फेन्टासीको प्रयोग भएको सुन्दर कविता हो । यसमा अतियथार्थवादी प्रवृत्तिको भावाभिव्यञ्जना पनि फेला पर्दछ । कवि समसामयिक राजनीतिक बेथिति र विसङ्गतिप्रति वाक्कदिक्क हुन्छन् र यसलाई बदलेर सभ्य समाज निर्माण गर्ने हुङ्कार यसरी प्रकट गर्दछन् ः
मलाई नछेक, मलाई नरोक
म पनि यो देशको सार्वभौम जनता हुँ
आकारमा सानो भए पनि
मैले जब विद्रोहको गीत गाउन थाल्छु
ठीक त्यतिबेला पहाडहरु खुम्चिन्छन्
आप्mनो अस्तिवको रक्षा खातिर
समय–समयमा म अग्निज्वाला बन्ने गर्छु ।
यहाँ कपिल अज्ञातको बोलीमा बोली मिलाउँदै फ्रान्सेली समालोचक हिपोलाइट टेनले कृतिमा हुनैपर्ने जाति, क्षण र समयको त्रित¤व अपरिहार्यता अर्यालका कृतिमा पनि फेला पर्दछ । त्यस्तो त्रित¤व भनेकै प्रतिनिधि कवितामा पाइने स्रष्टा, समाज र समयका रुपमा हेर्न सकिन्छ ।
यस रचनाको अर्को मुख्य सशक्त पक्ष भनेको आशावादी जीवनदृष्टि हो । यस्तो जीवनचेतना कुनै कुनै कवितामा प्रखर बनेर र कतै मन्द र कतै ज्यादै मधुरो बनेर प्रबाहित भएको देखा पर्दछ । यसको एउटा उदाहरण हेरौँ ः
उसले अझै हरेस खाएको छैन
भोलि उदाउने घाम
आप्mनो आङमा पनि पर्छ कि भन्ने आशामा
आज ऊ अनिँदै सुतेको छ
सुन्दर भविष्यको उसको खोज
आज र भोलि पनि यस्तै रहने छ ।
(पीडा चेतनाको, पृ. १०१)
कविले आप्mना मातापिताप्रति पनि असीम श्रद्धाभाव व्यक्त गरेका छन् । पूर्वीय दर्शनको आलोकमा जन्मीहुर्की शिक्षादीक्षा हासिल गरेका कविमा यसको गहिरो प्रभाव रहेको देखिन्छ । यस्तो कवितामा ‘अन्तिम सलाम बाबा तपाईंलाई’ र ‘मेरा बाबा मेरी आमा’ पर्दछन् । ‘दाइ भोक लाग्यो’मा समानता र समृद्धि, गरिबहरुप्रति असीम सहानुभूति तथा अभाव र बेथितिको मार्मिक वर्णन गरिएको छ । ‘बन्द गर बन्दहरु’ मा जडसूत्रवादी चिन्तनप्रति असहमति प्रकट गर्दै हड्ताल र बन्दहरु नगर्न आग्रह गरिएको छ । ‘म अखबार चलाउँछु’मा पत्रकारिताका धर्म र मर्मको जीवन्त वर्णन गर्दै विसङ्गतिवादी अस्तित्ववादी दृष्टि प्रकट गरिएको छ । ‘देश र पूmलहरुमा’मा सङ्कीर्ण रष्ट्रवाद र अतिवादप्रति असहमति व्यक्त गर्दै उदार राष्ट्रप्रेमी धारणा प्रस्तुत गरिएको छ । ‘संविधान’ले सामन्तहरुकै पक्षपोषण गरिरहेकोमा उनले गहिरो विमति प्रकट गरेका छन् । उनका विचारमा संविधानले गरिब, असहाय र पिछडिएका वर्गहरुको पोषण गर्नुपर्दछ । ‘दसैँ’ गरिबका लागि दशामात्र बन्ने गरेको तीतो यथार्थ प्रस्तुत गरिरहेकाले अब दसैँ दशा नबनेर उल्लास, उमंग र हर्षमय बन्नुपर्ने कविको धारणा देखिन्छ ।
‘हिउँमा के कविता लेखूँ’मा हिमालबासी नेपालीहरुप्रति असीम सहानुभूति प्रकट गरिएको छ । ‘मृत्यु भय’ मा समाज मनोविज्ञान तथा दार्शनिक चिन्तन फेला पर्दछ । ‘गाउँ तिमी अझै उदाएनौ र ?’मा प्रगतिवादी स्वर मुखरित हुन पुगेको छ । उनी यसमा गाउँप्रति असीम सहानुभूति राख्न पुग्दछन् । साथै, गाउँले परिवर्तन आत्मसात् गर्न नसकेकोमा दुःख व्यक्त गर्दै मानवतावादी भाव प्रकट गर्दछन् । ‘प्रिस्टिना’मा जातीयवाद र क्षेत्रीयतावादको विरोध गर्दै मानवतावादको गीत गाइरहेका फेला पर्दछन्, उनी । ‘मीतज्यू’ले गाउँ र सहरलाई तुलना गरेको छ । यसले सहरी मित्रलाई सम्बोधन गरी गाउँको पीडा र अभावलाई अभिव्यञ्जना दिने प्रयत्न गरेको छ । ‘पूmलमाया’मा नारीवादी तथा मानवतावादी चिन्तन मुखरित हुन पुगेको छ । ‘एउटा गाउँको कथा’ले पनि गाउँमा व्याप्त गरिबी, अशिक्षा, पीडा र व्यथाको चित्रण गर्दै गाउँलेमा विद्यमान इमानदारिता, भद्रता, पवित्र प्रेम, हार्दिकता, स्नेह र निर्दाेषिताको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरेको छ । ‘एक्काइसौँ शताब्दी र मेरो छोरो’ले विज्ञान र प्रविधिले पैदा गरेको विकृति र विसङ्गतिको चित्रण गर्दै बलियाले निर्धामाथि गर्ने शासनको विरोध गरेको छ । ‘मास्टरजी’ले शिक्षण विधि तथा प्रविधिमा नयाँपन उपयोग गर्नुपर्ने तथा बालमनोविज्ञान बुझेर शिक्षण गर्नुपर्ने विचार प्रकट गरेको छ ।
रातो किताबले बजेट गाउँमैत्री, गरिबमैत्री, मजदुरमैत्री तथा किसानमैत्री हुन नसकेको यथार्थलाई जीवन्त अभिव्यक्ति दिएको छ । ‘परदेशबाट’ले रोजगारीका लागि विदेसिनु परेका युवायुवतीहरुको पीडालाई अभिव्यक्ति दिएको छ । ‘हराएको बालक’ ले सडक बालबालिका जन्मनुका कारण र सरकारका गैरजिम्मेवारपूर्ण क्रियाकलापप्रति कटाक्ष गरेको छ । ‘कुकुरहरु’ले प्राणीप्रेम प्रकट गरेको छ । कुकुरले हिजोदेखि आजसम्म नै उसका खास आदतहरु नबदलेको तर चेतनशील भनिएको मानिसले चाहिँ पाशविकताबाट पनि तल झरेर निकृष्टतम व्यवहार गर्ने गरेकोमा ज्यादै दुःख व्यक्त गरेको छ । ‘मैना’ले राजनीतिक विसङ्गतिप्रति तीव्र व्यङ्ग्य प्रहार गरेको छ । यसले युद्ध अपराधी, मानवताका विरोधी तथा रक्तपिपासुहरुकै हालीमुहाली भइरहेकोमा कडा आक्रोश पोख्दै स्वाधीनताका लागि क्रान्ति गर्नैपर्ने बाध्यता अवशेष रहेको औंल्याइएको पनि छ ।
‘ईश्वरत्वको खोजीमा’ कविताले ईश्वरत्वको साक्षात्कार चर्मचक्षुले नभई मानस चक्षुले हुने अनुभूति प्रस्तुत गरेको छ । ‘उसले माक्र्सवाद छाड्यो’ कविताले माक्र्सवादबाट पतित भई सामन्तवादतर्फ झरेका बौद्धिक वर्गका निकृष्ट चिन्तनको वर्णन गरिएको छ । यसले खोक्रो आदर्शवादमा रमाउने माक्र्सवादीहरुप्रति धारिलो व्यङ्ग्य प्रहार गरेको छ । यस्तै, अन्य कविताहरुमा समेत सघन भावाभिव्यञ्जना पाइन्छ ।
पूर्वीय काव्यलक्षणको एउटा अत्यन्त सुन्दर अर्थालङ्कारअन्तर्गत पर्ने एउटा मालोपमा अलङ्कारयुक्त कविता हेरौँ ः
चन्द्रमा झैँ तड्पिएको
विरहीझैंँ विरहैविरहमा डुबेको
शिकारीले जोडी मारेर छाडेको
एउटी अदना चरीजस्तै
छट्पटिरहेँ म तिम्रो लागि ।
(तिम्रो लागि, पृ. ५१)
यस सङ्ग्रहका अधिकांश कविताहरुमा रुपकको सुन्दर संयोजन गरिएको फेला पर्दछ । तीमध्ये एउटा दृष्टान्त यस्तो छ ः
देशलाई भूगोल दिने
हुम्ला, जुम्ला र बाजुराहरु
भोकभोकै मर्न लागेको बेला
काठमाडौँमा सरकार फालेर
अर्को सरकार बनाउने खेल चल्दै छ ।
(हुम्लाको भोक, पृ. २१)
उत्प्रेक्षा र उपमासँगै प्रस्तुत भई कवितामा भाव सौन्दर्य सिर्जना गर्नमा कवि अर्यालका कविता निकै अगाडि छन् । यसको एउटा दृष्टान्त यस्तो छ ः
त्यहाँ मलामीहरु, मृतकका आफन्तहरु
एक क्षण वियोगको पीडाबोध गर्छन्
स्वयं आफैँ मरेको हुँ झैँ गर्छन्
तर, जब आर्यघाटबाट दाहसंस्कार सकेर
आ–आप्mनो घर लाग्छन् ।
(मृत्यु भय, पृ. ५२ र ५३)
बिम्ब र प्रतीकहरुको सशक्त प्रयोग गरिएको एउटा अनुच्छेद यस्तो छ ः
उसलाई ढुंगामा खोजिरहेको देख्छु
देउराली र चौतारीहरुमा
पूmल र अक्षता चढाइरहेको भेट्छु
भीडका भीड मानिसहरु
पंक्तिबद्ध भएर उभिएका छन्
मन्दिर र मस्जिदहरुमा
त्यो हराएको ईश्वर पाउन ।
(ईश्वरत्वको खोजीमा, पृ. ९४ र ९५)
यस आधारहरुलाई संयोजन गरेर हेर्दा यस समीक्ष्य कृतिका भूमिकाकार कपिल अज्ञातले भनेजस्तै यसमा सरल र नवीनतम प्रतीक तथा बिम्बको प्रयोग गरी भावलाई सघन बनाउनमा कवि अर्याल खप्पिस छन् भन्न सहजै सकिन्छ ।
यसरी प्रस्तुत कृतिमा विकृति र विसङ्गतिप्रति तिखो व्यङ्ग्य प्रहार गरिएको छ । यस्तै, निराशावादी जीवनचेतना, अपार राष्ट्रप्रेम, युगीन तथा समसामयिक यथार्थ, प्रगतिवादी स्वर, आशामुखी जीवनवादी दृष्टि, स्वस्थ तथा पवित्र प्रेम, मानवीय पीडा, स्वस्थ समाजको परिकल्पना, पेसागत धर्ममर्म र पीडा, स्वस्थ लेखन, आत्मिक दर्शन, क्रान्तिकारी भाव, भावुकता र स्वच्छन्दतावादी भाव, फेन्टासीको प्रयोग, विसङ्गतिवादी, आत्मिक प्रेम, समयको मह¤व, अस्तित्ववादी जीवन चेतना र मानवतावादी भाव पनि मुख्य स्वर बनेर आएका छन् ।
यसरी सबैलाई साक्ष्य मानेर विश्लेषण गर्दा प्रस्तुत सङ्ग्रह अर्यालको प्रतिनिधि कविताहरु भन्नमा कुनै हिच्किचाहट हुँदैन । अझै भन्दा यस कृतिले गद्यकविताको कोणबाट हेर्दा केही हदसम्म सिङ्गो समसामयिक कविताहरुकै प्रतिनिधित्व गरिरहेको प्रतीत हुन्छ ।
(ती दिनहरु) सुरथप्रसाद र तोरण शर्माहरु